भ्रमणवर्षको प्रचार कछुवा गतिमा | eAdarsha.com
भ्रमणवर्षको प्रचार कछुवा गतिमा
१. सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमणवर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको धेरै भयो। सरकारले त्यो निर्णय गरेपछि एकताको प्रचार प्रसार तीव्र रुपमा भएको थियो तर त्यसै बीच पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको जहाज दुर्घटनामा दुःखद निधन भयो। त्यस पछि भएको प्रचार प्रसार जे जति हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन।
२. सरकारले राष्ट्रिय रुपमा भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको यो तेस्रो पटक हो। यस अघि सन् १९९८ मा पहिलो पटक भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरिएको थियो। त्यसबेला प्रचार प्रसारको अभावमा लक्ष्य हासिल हुन सकेन। दोस्रो भ्रमण वर्ष पनि त्यसैगरी बितेको थियो।
३. यस पटक पहिलो र दोस्रोको अनुभव थियो। २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य हासिल हुने अनुमान गरिएको हो। तर छुट्टै पर्यटनमन्त्रीको अभावमा काम कुरा जे जसरी बढ्नु पर्ने थियो। त्यो बढेको छैन। पर्यटन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैले लिएर बसेका छन्।
४. नेपाल भ्रमण वर्षलाई सघाउन प्रदेशहरु लागि परेका छन्। गण्डकी प्रदेशले त्यसलाई सघाउन सन् २०१९ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्ष मान्दैछ भने प्रदेश नम्बर ५ ले लुम्बिनी भ्रमणवर्ष घोषणा गरेको छ। त्यस्तै रारा भ्रमण वर्ष पनि आयोजना गरेको सर्वविदितै छ।
५.ती सबै भएर पनि प्रचार प्रसारमा गति आउन नसकेको अनुभव गरिएको छ। यसको प्रचार प्रसार देशभित्रभन्दा बाहिर गर्नुपर्दछ। अब पाँच महिना पछि भ्रमणवर्ष शुरु हुँदैछ। फेरि विदेशीहरु आफ्नो भ्रमण कार्यक्रम २/३ महिना पहिले तय गर्दछन्, भ्रमणवर्षको भरपर्दो पूर्वाधार गौतम बुद्ध विमानस्थल अब ६ महिनामा पनि पूरा तैयारी हुने अवस्था छैन।
६. सरकारले भ्रमणवर्षको प्रचार प्रसारका लागि भारतको निजी सिने कम्पनीको पुरस्कार वितरण समारोह नेपालमा गर्न लागेको हो। तर त्यो पनि विवादास्पद भयो। त्यस सम्बन्धमा अहिले के भइरहेको छ प्रष्ट छैन। तर सरकार त्यो आयोजना गर्ने पक्षमा छ।
७. सरोकारवालाहरु प्रधानमन्त्रीले छुट्टै पर्यटनमन्त्री नियुक्त गर्नुपनेर्मा जोड दिँदैछन्। भ्रमणवर्ष समितिलाई बजेटको अभाव भएको गुनासो पनि छ। ती सबै कारणहरुले गर्दा भ्रमणवर्षको प्रचार प्रसार कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ। त्यसको गति बढाउनु नितान्त आवश्यक छ। यसमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ।